Akụkọ - Ihe ndị a ga-atụle mgbe ị na-ahọrọ ụrọ carbide cimented
Mgbe ị na-ahọrọ ụrọ carbide cimented, a ga-ebu ụzọ buru ụzọ tụlee ihe ziri ezi nke nha chọrọ. N'ikwu okwu n'ozuzu, ka oghere nke a ga-ahazi na-adị ntakịrị, ka ntachi obi ahụ na-adị ntakịrị. Ya mere, ndị na-emepụta ihe na-akpụ akpụ na-ekewakarị olulu dị ka dayameta aha nke oghere a na-arụ ọrụ si dị. N'ime ụdị anọ dị n'elu nke cemented carbide drills, siri ike cemented carbide drills nwere elu machining ziri ezi (nso nke ndidi nso nke φ10mm siri ike cemented carbide drills bụ 0 ~ 0.03mm), ya mere ọ bụ a mma nhọrọ maka machining elu-nkenke oghere; The ndidi. nso nke welded cemented carbide drills ma ọ bụ replaceable cemented carbide okpueze drills bụ 0 ~ 0.07mm, nke kwesịrị ekwesị maka oghere nhazi na izugbe ziri ezi chọrọ; drills na cemented carbide indexable inserts bụ ndị dabara adaba maka ịrụ ọrụ siri ike machining Ọ bụ ezie na ọnụ ahịa nhazi ya na-adịkarị ala karịa ụdị egwuregwu ndị ọzọ, nhazi ya dịkwa ntakịrị ala, yana oke nnabata nke 0 ~ 0.3mm (dabere n'ogologo ka dayameta ruru nke akuakuzinwo ahụ), n'ihi ya, ọ na-ejikarị maka oghere nhazi na ala nkenke , Ma ọ bụ mezue agwụcha nke oghere site dochie agụba na-agwụ ike.
E kwesịkwara ịtụle nkwụsi ike nke ọkpọ ahụ n'onwe ya. Dị ka ihe atụ, siri ike carbide drills bụ ihe siri ike karị, n'ihi ya, ha nwere ike nweta elu machining ziri ezi. Ihe ntinye ntinye nke carbide indexable simented nwere nkwụsi ike n'usoro adịghị mma yana ọ na-enwekwa ike ịtụgharị. A na-etinye ihe ntinye abụọ nwere ike ịkọwapụta n'elu bit a. A na-eji ihe ntinye n'ime ya na-arụ ọrụ n'etiti oghere ahụ, a na-eji ihe ntinye nke dị n'ime ya na-eme ka ọkpụkpụ dị n'èzí site na ntinye n'ime ya ruo n'obosara. Ebe ọ bụ na ọ bụ naanị n'ime agụba na-abanye n'ime ịkpụ na nhazi mbụ nke nhazi, ihe ọkụkụ ahụ dị na ọnọdụ na-adịghị eguzobe, nke nwere ike ime ka ọkpụkpụ ahụ na-agbapụ ngwa ngwa, na ogologo oge nke ntanye ahụ, na-abawanye ụba nke ntụgharị. Ya mere, mgbe ị na-eji cemented carbide indexable ntinye ntinye nke nwere ogologo ihe karịrị 4D maka ịkụ ala, a ga-ebelata nri ahụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị na mmalite nke oge ịkụ ala, na ọnụego nri kwesịrị ịba ụba na ọkwa nkịtị mgbe ịbanye n'ụkwụ kwụsiri ike. usoro .
Ihe nkedo nke simenti na-agbado agbado na okpueze nke carbide na-agbanwe agbanwe bụ nke nwere akụkụ mbelata ihe abụọ nwere ụdị ihu geometric na-adabere na ya. Nke a elu-kwụsie ike ọnwụ onu imewe na-eme ka ọ dịghị mkpa mgbe ịcha n'ime workpiece Belata ndepụta ọnụego, ma e wezụga mgbe akuakuzinwo na-arụnyere obliquely na bee na a ụfọdụ akụkụ n'elu nke workpiece. N'oge a, a na-atụ aro ka ị belata ọnụego nri site na 30% ruo 50% mgbe ị na-egwupụta ma na-apụ. N'ihi na ọkpụkpụ ígwè nke ụdị ihe ọkụkụ a nwere ike ịmepụta obere nrụrụ, ọ dị nnọọ mma maka nhazi lathe; ebe eriri carbide siri ike na-agbaji agbaji, ọ na-adị mfe ịgbaji mgbe a na-eji ya eme ihe maka nhazi lathe, karịsịa ma ọ bụrụ na ọkpụkpụ na-adịghị mma. Nke a bụ eziokwu karịsịa mgbe ụfọdụ.
Mwepụ mgbawa bụ nsogbu enweghị ike ileghara anya na mkpọpu ihe. N'ezie, nsogbu a na-enwekarị n'ịgba mmiri bụ iwepụ mgbawa na-adịghị mma (karịsịa mgbe a na-eji ígwè arụ ọrụ na-arụ ọrụ obere carbon), na nsogbu a enweghị ike izere n'agbanyeghị ụdị egwu a na-eji. Ụlọ ọrụ nhazi ihe na-ejikarị ogwu ogbugba dị n'èzí na-enyere aka iwepụ mgbawa, ma usoro a na-adị irè naanị mgbe omimi nke oghere a na-edozi dị ntakịrị karịa dayameta nke oghere ahụ ma na-ebelata njedebe nke ịkpụ. Na mgbakwunye, a ga-ahọrọ ụdị coolant kwesịrị ekwesị, ọnụego na-erugharị na nrụgide iji kwekọọ na dayameta nke ihe ọkụkụ. Maka ngwaọrụ igwe na-enweghị usoro jụrụ oyi na spindle, a ga-eji ọkpọkọ coolant. Ka oghere ahụ dị omimi nke a ga-edozi, otú ahụ ka ọ na-esiwanye ike iwepụ ibe na otú ahụ ka nrụgide coolant chọrọ. Ya mere, opekempe coolant eruba na-atụ aro site akuakuzinwo ndị emeputa kwesịrị ijide n'aka. Ọ bụrụ na mmiri oyi ezughị oke, a ga-ebelatarịrị ihe eji arụ ọrụ.